Wargeyska Guardian oo si hordhac ah u sheegay ganaaxa la filayo inuu maridoona Ronaldo kadib roosihii tooska ahaa uu xalay qaatay – Gool FM
(Yurub) 20 Sab 2018. Weeraryahanka Juventus Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa in laga qafiifin doono ganaaxa la filayay in la kulmi doono, kadib markii uu kulankii xalay Champions League ee Valencia uu qaatay kaarka roosaha ee toos ah.
Wargeyska “The Guardian” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Cristiano Ronaldo la filayo in la ganaaxo hal kulan oo kaliya, taasoo ka dhignaan doonta inuu diyaar u noqon doono kulanka Manchester United ay ku booqan doonaan Old Trafford bisha soo aadan.
Laacibka kooxda Juventus ayaa seegi doono kaliya kulankooda soo aadan ay tartanka Champions League kula ciyaari doonaan kooxda Young Boys Allianz Stadium.
Si kastaba ayaa Ronaldo ayaa ooyin iyo barroor garoonka kala baxay kadib markii kaarka cas oo toos ah loo taagay kulankii ay kooxdiisa Juventus guusha ka soo gaadhay Valencia.
SAWIRRO: Pedro oo Garoonka laga qaaday ciyaartii iminka ee Chelsea...(Waa sidee xaalkiisa?)